ဆရာဇင်ယော်နီ ၏ သင် ဘယ်လို အိမ်ထောင်ဖက် နဲ့ ပေါင်းဖက်ရမလဲ…. - Myannewsmedia
ဆရာဇင်ယော်နီ ၏ သင် ဘယ်လို အိမ်ထောင်ဖက် နဲ့ ပေါင်းဖက်ရမလဲ….
ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်က အဘိုးအဘွား များနှင့် အနေများခဲ့လေ၏။ညညများဆိုလျှင်အိမ်ရှေ့ ၌ ဖျာကြမ်းလေးခင်းကာ အဘိုးအဘွား များနှင့် အိမ်နီးချင်းလူကြီးများသည် ရေနွေးကြမ်းအိုး နှင့် လက်ဖက်သုပ်ပန်းကန်ကို ဝိုင်းလယ်တွင်ချ၍ ရောက်တတ်ရာရာ စကားများကို ပြောတတ်ကြလေ၏။
ကျွန်ုပ်တို့ ကလေး များသည် ရွှေစွန်ညို ဘာကိုလိုလို့ဝဲပါတယ်၊ ဆီမီးခွက်က ပြောင်းပြန်ပြောင်းပြန်၊ ရွှေတံခါးကြီးဖွင့်ပါဦး၊ ညောင်ပင်တစ္ဆေ ဝေလေလေ …စ သည်ဖြင့် မြန်မာကစားနည်းမျိုးစုံကို ချွေးသံအရွှဲရွှဲ၊ ဖုန်အလူးလူးဖြင့် အော်ဟစ်မြူးတူးကာ ကစားခဲ့ကြလေ၏။
ပြေးရင်းလွှားရင်း လူကြီးများ စကားဝိုင်းအ နီးသို့ ရောက်သွားသောအခါများ တွင် ဖုန် များပေနေသည့်လက်ကို ဘောင်းဘီဖြင့်သုပ်ကာ လူကြီးများ ၏ရှေ့သို့ လက်ဝါးဖြန့်၍ပြကြလျှင် လူကြီး များက လက်ဖက်သုပ်တစ်ဇွန်းကိုယူ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လ က်ဝါး ထဲသို့ ထည့်ပေးလေ့ရှိလေ၏။ ပြီးနောက် လူကြီး များက “သွားကြ ..သွားကြ ..” ဟူသည့်သဘောဖြင့် လက်ကိုကာ၍ပြကြလေ၏။ သဘောမှာ လူကြီး တွေစကားပြောသောနေရာအနီး၌ လာမရှုပ်ကြနှင့်၊ ဝေးဝေးမှာသွားပြီးဆော့ကြဟူသည့်သဘောဖြစ်လေတော့၏။
သင် ဘယ်လို အိမ်ထောင်ဖက် နဲ့ ပေါင်းဖက်ရမလဲ…. 1
ကစား၍ မောပန်း လာသောအခါများတွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီး များ၏ ပေါင်ပေါ်တွင် ခေါင်းတင်ကာ ကောင်းကင်ပြင်ကြီး ကို ငေးမောနေမိတတ်ကြလေ၏။ ကြယ်ပွင့်ကလေး များ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေသည့် ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကို တစ်ဝကြီး ငေးမောခဲ့ကြရသည်မှာ ယခု ပြန်တွေးသောအခါ၌ လွမ်းဖွယ်အတိ ဖြစ်ရလေတော့၏။
ကျွန်ုပ်တို့ သည် လူကြီး များ ပြောလေ့ရှိသောကြောင့်မြောက်အရပ်တွင် ထူးထူးခြားခြား မြင်ရတတ်သော ကြယ်ပွင့်ကြီး သည် ဓူဝံကြယ် ဖြစ်သည့်အကြောင်း၊ ညအခါ ခရီးသွားလျှင် ဓူဝံကြယ် အား မြောက်ဘက်အရပ်အဖြစ် အမှတ်သင်္ကေတပြု ကာ သွားကြရကြောင်းကိုလည်း မှတ်သားမိကြရလေ၏။
ထို့အပြင် ခုနစ်စဉ်ကြယ်ဟူသည်ကိုလည်း မျက်စိ ထဲတွင် စွဲနေကြလေ၏။ အဆိုပါ ကြယ်ခုနစ်လုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ခုနစ်စဉ်ကြယ် ၏ အမြီးပိုင်း သည် ညဥ့်နက်သောအခါ အပေါ်သို့ တဖြည်းဖြည်း တက်လာလေ၏။ခုနစ်စဉ်ကြယ် အမြီး ထောင်ပြီဆိုလျှင် ညဥ့်နက်ပိုင်းသို့ ရောက်လာပြီဆိုသော အမှတ်သင်္ကေတဖြစ်လေတော့၏။
ထို့အပြင် ကြယ်ပွင့်များ ကြွေကျသွားသည်ကိုမြင်လျှင်တံတွေးထွေးသကဲ့သို့ “ဖတ် ..ဖတ်”ဟု ပြုလုပ်ရသည်မှာလည်း အမော ပင်ဖြစ်လေတော့၏။ ထိုသို့ကြယ် ကြွေသည်ကိုမြင်လျှင် ကံမကောင်းတတ်သည့်အကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ဖတ် ..ဖတ် ဟု လုပ်လိုက်လျှင် ကံကောင်းပြီးလာဘ်ရွှင်သည့်အကြောင်းများကိုလည်း လူကြီးများ က ပြောပြကြလေ၏။
သင် ဘယ်လို အိမ်ထောင်ဖက် နဲ့ ပေါင်းဖက်ရမလဲ…. 2
ထို့အပြင် ကြယ်ပွင့် များ၏အကြားတွင် တရွေ့ရွေ့လေးသွားနေသော ဂြိုဟ်တု များကိုလိုက်၍ကြည့်ရသည်မှာလည်း မမောနိုင်မပမ်းနိုင် ဖြစ်ပါလေတော့၏။ အခါပေါင်းများစွာတွင်လည်း လူကြီးသူမတို့ပြောသော ရှေးဖြစ်ဟောင်း အောက်မေ့ဖွယ်တို့ကို စိတ်ဝင်တစားနားထောင်မှတ်သားခဲ့ကြရလေ၏။ကျွန်ုပ် တစ်ခု သတိရနေမိသည်မှာ ကျွန်ုပ်၏ အဘွားနှစ်ဝမ်းကွဲတော်စပ်သော ဒေါ်မြသီ၏အကြောင်း ဖြစ်လေတော့၏။ အဘွားဒေါ်မြသီ အပျိုပေါက်အရွယ်တွင် ဒေါ်မြသီ ကို အိမ်ထောင် ချပေးမည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်မြသီ ၏ အဖေ နှင့် အမေ သည် လင်မယား ကွဲခဲ့ကြသည်ဟု သိရလေ၏။
ဒေါ်မြသီ ၏ မိခင်ကြီး က သူ၏ သမီး အား ကုန်သည် ကိုဖိုးတင်နှင့် ပေးစားလို၏။ ဒေါ်မြသီ ၏ ဖခင်ကြီးကမူ လခစားစာရေး ကိုသာစိန်နှင့် ပေးစားလို၏။ မည်သို့မျှ ညှိနှိုင်း၍မရကြဘဲ နောက်ဆုံးတွင် အဘွားဒေါ်မြသီသည် မိခင် ဖြစ်သူ၏ ဆန္ဒအတိုင်း ကိုဖိုးတင်နှင့် အကြောင်းပါခဲ့လေ၏။
တစ်နှစ်ခန့်အကြာမှာပင် အောက်ပြည်အောက်ရွာသို့ကုန်ကူးသွားသော ကိုဖိုးတင်သည် ဓားပြ များ၏လက်ချက်ဖြင့် ဆုံးပါးခဲ့ရရှာလေတော့၏။ အဘွား ဒေါ်မြသီမှာလည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် မုဆိုးမ ကလေး ဖြစ်ခဲ့ရရှာလေတော့၏။ ထိုအခါတွင်မှ အဘွား ဒေါ်မြသီ ၏ ဖခင်ကြီး က –
“ငါမပြောဘူးလား …၊ ငါတို့ သမီး ဟာ မောင်ဖိုးတင်လို ခရီးလှည့်လည်သွား လာနေရတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်မျိုးနဲ့ဆိုရင် ကံမစပ်ဘူး …၊ အခြေတကျနေရတဲ့ မောင်သာစိန်လို လူမျိုးနဲ့ပဲ ကံစပ်မယ်ဆိုတာငါက သိပြီးသား …၊ ငါ ငယ်ငယ်တုန်းက ရွာဦးကျောင်းမှာနေခဲ့ရတုန်းက တို့ဆရာဦးသောဘိတက တွက်နည်းလေးတစ်ခု သင်ပေးခဲ့ဖူးတယ် …၊ ငါ့စကားကို နားမထောင်တော့ ငါ့သမီးလေးခမျာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မုဆိုးမ ဖြစ်ရရှာတာပေါ့ …”ဟု တောက်တခေါက်ခေါက်ဖြင့် တဖွဖွ ပြောလေ၏။
အဘွားဒေါ်မြသီ၏မိခင်ကြီးကလည်း ထိုအခါတွင်မှ –“ကျုပ် မှားပါပြီတော် …”ဟု ဝန်ခံသဖြင့် ၎င်းင်တို လင်မယား သည် ပြန်လည် အကြောင်းဆက်၍ ပေါင်းဖက်ခဲ့ကြသောဟူ၏။များမကြာမီမှာပင် အဘွားဒေါ်မြသီကိုလည်း စာရေးကိုသာစိန်နှင့် လက်ဆက်ပေးစားခဲ့ကြပြန်လေတော့၏။ အဘွားဒေါ်မြသီသည် ကိုသာစိန်နှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီးသည့်နောက် စီးပွားဥစ္စာ ဒီရေအလား တိုးပွားခဲ့သည် ဟု သိရလေ၏။
ကျွန်ုပ်အနေနှင့် ထိုအကြောင်းအရာကို လူကြီးသူမ များ အကြောင်းဆုံ၍ စကားစပ်မိသောအခါများတွင် ပြောပြလေ့ရှိသည်ကို မှတ်မိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်လေ၏။နောင်သော် ကျွန်ုပ်သည် အဘမင်းသိင်္ခထံသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးသည့်နောက် အဘထံမှ ဗေဒင် ပညာရပ်များကို သင်ယူခွင့်ရခဲ့လေ၏။ အဘထံမှ ဗေဒင် ကိန်းခန်းတွက်နည်းတွက်ရိုးများအပြင် ဗေဒင် ပညာ အပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ် တွေးတောယူဆချက်များကိုလည်း ရရှိခဲ့လေ၏။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ် သည် ကျွန်ုပ် ငယ်စဉ်က ကြားဖူးခဲ့သော အဘွားဒေါ် မြသီ၏ အိမ်ထောင်ရေးကံကို မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာဖြင့် နောက်ကြောင်းပြန်လိုက်၍ ကြည့်ခဲ့လေတော့၏။ ဤတွင် ခုနစ်ရက်သားသမီးများအတွက် အိမ်ထောင်ရေး ကံ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူကွဲပြား၊ တစ်မူထူးခြားနိုင်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါလေတော့၏။သို့ဖြစ်၍လည်း မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်း၊ သားသမီးမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းကောင်း ကြုံတွေ့လာနိုင်သော အိမ်ထောင်ရေးကံ ကို ချိန်ဆနိုင်ကြစေရန်အလို့ငှာ အောက်ပါအတိုင်း မဟာဘုတ်ဖြင့် စာတစ်ပုဒ် ရေး သားလိုက်ရပေတော့သတည်း။ ။
မိမိ၏ မြန်မာမွေးခုနှစ်ကိုတည်၍ ၇ ဖြင့်စားပါ။
(၁) ကြွင်းသောသူများသည် အိမ်ထောင်ရေး မတည်မြဲသောကံ ပါလာပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ဖက်သည် အမြဲလိုလို ခရီး သွားလာနေရသူများ၊ မောင်တစ်ရွာ မယ်တစ်မြို့ဆိုသကဲ့သို့ ခွဲခွာနေရသောသူများနှင့် ပို၍ အကျိုးပေးတတ်ပါသည်။
(၂) ကြွင်းသောသူများသည် အိမ်ထောင်ရေးကံ အထူးကောင်းတတ်ပါသည်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော၊ ငွေကြေးစီးပွား၊ ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ကြီးမြင့်သော အိမ်ထောင် ဖက်နှင့် အကြောင်းဆက် ပေါင်းဖက်ရတတ်ပါသည်။
(၃) ကြွင်းသောသူများသည် အိမ်ထောင်ပြုရန် ရည်ရွယ်သည်ကတစ်ယောက်၊ တကယ်အိမ်ထောင်ကျသည်ကတစ်ယောက် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အလုပ်အပြောင်းအလဲ များသော၊ ဘ၀ ကံ အတက်အကျကြမ်းသော အိမ်ထောင်ဖက်မျိုးနှင့် အကြောင်းဆက်ရတတ်ပါသည်။ မင်းမှုထမ်း ဝန်ထမ်း ၊ လခစား များနှင့် အိမ်ထောင် ကျတတ်ပါသည်။
(၄) ကြွင်းသောသူများသည် အထူးချမ်းသာကြွယ်ဝသော
သူဌေးသူကြွယ်ကြီးများ၊ ပညာရပ်တစ်ခုခုတွင် ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်သော ပညာရှင်များ၊ ရာထူးဂုဏ် ရှိန်ကြီးမြင့်သောသူများနှင့် အကြောင်းဆက် ပေါင်းဖက်ရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ဖက် ၏ အရှိန်အဝါဖြင့် အများသူငါတို့၏ အရေးထား လေးစားခြင်းကို ခံရတတ်ပါသည်။
(၅) ကြွင်းသောသူများသည် အိမ်ထောင် မမြဲတတ်ခြင်းကို သတိပြုရပေလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးညံ့သောသူနှင့် အိမ်ထောင်ကျရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင် မြဲလျှင်ပင် အိမ်ထောင်ဖက် အိမ်ပေါ်မှ မကြာခဏ ဆင်းသွားခြင်း၊ ကွဲလိုက်ပြန်ပေါင်းလိုက်ဖြစ်ခြင်းများ အဖြစ်များတတ်ပါသည်။ မောင်တစ်ရွာ မယ်တစ်မြို့ ခွဲခွာနေရလျှင် ပို၍ အကျိုးပေးစေပေမည်။
(၆) ကြွင်းသောသူများသည် မထင်မှတ်ဘဲ အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါသည်။ မရည်ရွယ်သောသူနှင့် အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အိမ်ထောင်ကျပြီးသည့်နောက် စီးပွားတက်ခြင်း၊ ချမ်းသာသုခ ခံစားရခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ နေရာ ဒေသတစ်ခု၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းတွင် စွဲမြဲစွာနေထိုင်လုပ်ကိုင်သောအိမ်ထောင်ဖက် နှင့် အကြောင်းဆက်ရတတ်ပါသည်။
(ဝ) ကြွင်းသောသူများသည် မိဘ အသိုင်းအဝိုင်း က သဘောမတူသောသူနှင့် အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ပြုရန်ကိစ္စတွင် အထစ်အငေါ့ အနှောင့်အယှက် များတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးသည့်နောက်တွင်လည်း တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ ခွဲနေရသည်က များတတ်ပါသည်။ နှစ်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်း အဆင်မပြေ မှုကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး တွင် စိတ်ရှုပ်ရတတ်ပေသည်။
(ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ ၃ ချက်လုံးညီညွတ်အောင် ချိန်ဆ အားထုတ်နိုင်ကြပါစေသောဝ်)
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် — thutastar
Previous post ချစ်စရာ ညအိပ်ဝတ်စုံလှလှလေးနဲ့ “သူစိမ်းအိမ်” Pajama Party ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး
Next post ဆရာဝန်နဲ့မှ ချစ်သူဖြစ်ချင်တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ နိဂုံးအဆုံး